Imbwa snacks: Yummy anobata chipfuyo chako | Imbwa dzeNyika
Imbwa snacks: Yummy inobata chipfuyo chako
Kudya kwembwa ndeye, mushure mekudya kwatinopa mhuka dzedu zuva nezuva, chikamu chenguva dzose chekudya kwavo, kunyange zvazvo vasina kuganhurirwa bedzi pakuvapa mufaro muduku nguva nenguva, asi vane zvimwe zvinoshandiswa zvinogona kutibetsera kuvandudza mufambiro wavo uye kunyange kusimbisa ukama hwedu navo.
Muchikamu chino tichazotaura pamusoro pezvakanakisa imbwa zvekudya zviripo pamapeji akaita seAmazon, pamwe chete nekushandiswa kwakasiyana-siyana kwatinogona kupa izvi zvinobata, izvo zvokudya zvevanhu zvatingashandisa semubairo uye kuti ndezvipi zvokudya zvatisingambofaniri kuvapa. Uye kana iwe uchida kuenderera mberi nemutsara uyu, tinokurudzira kuti utarise chimwe chinyorwa ichi mapfupa akanakisa embwa.
Arquivet Twist nehuku ...
Mediterranean Nature -...
Arquivet Zvinyoro Nyoro ...
FriGERA Zvidimbu zveImbwa...
Pedigree Dentastix Chikafu ...
1 The best snack kune imbwa
1.1 Zvokudya zvemazino zvinofema mweya
1.2 Zvokudya zvinyoro uye zvinonaka
1.3 Salmon zvinyoro zvinotapira
1.4 Beef uye cheese squares
1.5 bhonzo hombe rakaoma
1.6 Zvokudya zvekudya zvembwa diki
1.7 Natural snacks kune imbwa
2 Zvikafu zvembwa zvinodiwa here?
3 Pane masnacks evanhu kumbwa here?
3.1 Chii chisingadyi imbwa?
4 Kupi kunotenga chikafu chembwa
The best snack kune imbwa
Zvokudya zvemazino zvinofema mweya
Pedigree Dentastix Nyowani ...
Hapana chinhu chakanakisa sekumuka mangwanani nemweya wembwa yako pachiso chako nekuti inoda kufamba famba. Izvi zvekudya zvembwa, kunyangwe zvisingatadzise kufema kwembwa yako kunhuhwirira sembwa, dzinozorodza kusvika pamwero wakati uye dzinosiya mweya wekufema. Chero zvazvingava, ivo vakanaka pakuchenesa mazino avo, sezvavanotarisira mazamu uye kubvisa kusvika ku80% yetartar nekuda kwechimiro chavo. Ichi chigadzirwa ndechembwa dzepakati kubva pa10 kusvika ku25 kilos, kunyangwe akawanda akawanda aripo.
Zvokudya zvinyoro uye zvinonaka
Vitakraft - Zvibvumirano...
Vitakraft inogadzira zvimwe zvekudya zvembwa nekatsi izvo zvavanongofarira. Muchiitiko ichi, ivo vakapfava kwazvo paté-based snacks, ine 72% nyama, pasina dhayi kana antioxidants. Hapana mubvunzo kuti vanonakidza uye imbwa dzinopenga navo, kunyange iwe unofanirwa kuchengeta mupfungwa kuti iwe unogona kungovapa zvishoma pazuva zvichienderana nekurema kwavo (kupfuura gumi mu 10-kilo imbwa). Iwo zvakare akati wandei anodhura kupfuura avhareji, chimwe chinhu chekufunga nezvacho.
Salmon zvinyoro zvinotapira
ARQUIVET Zvikapfava Zvokudya...
Arquivet ndeimwe yemhando dzinotungamira muchikafu chechisikigo chemhuka zvakare ine yakakura sarudzo yezvikafu zvembwa dzemarudzi ese. Aya maumbirwo emapfupa akapfava uye akanaka, uye nepo aya ari salmon-inonaka, gwayana, nyama yemombe kana huku inowanikwawo. Iwe unogona zvakare kusarudza huwandu hwepakeji kuitira kuti ibude zvakanyanya paaccount kana imbwa yako ikaidya nekukurumidza.
Beef uye cheese squares
Vitakraft - Chimuti Chemombe...
Imwe yezvitatu zveVitakraft, panguva ino nekuoma kwakanyanya kwenyama yemombe uye yakafukidzwa nechizi, asi kana usina kugutsikana kuti vane chimwe chiropa uye mbatatisi.. Kunyangwe ichiti inodhura kupfuura avhareji, chokwadi ndechekuti vanoda masiwiti emhando iyi. Mukuwedzera, ivo havana zviyo, zvinowedzera kana zvigadziriswe kana shuga yakagadzirwa uye vanouya mubhegi rinoshanda rine chisimbiso chemhepo kuitira kuti iwe ugozvitora kwose kwose. Tarisa kuti zvingani zvimedu zvaunogona kumupa pazuva zvichienderana nehuremu hwake.
bhonzo hombe rakaoma
Arquivet Hamu pfupa ...
Kana imbwa yako yakanyanya kuoma uye iwe uchida kumupa chimwe chinhu chine zvinhu, bhonzo iri, zvakare kubva kuArquivet brand, richamufadza: maawa nemaawa ekutsenga kunakidzwa izvo zvichabatsirawo kuchengeta mazino ako akachena uye kukupa iwe calcium. Iwe unogona kutenga pfupa chete kana mumapakiti e15, ose anogadzirwa ne ham uye anobatwa zvakasikwa.
Zvokudya zvekudya zvembwa diki
TRIXIE Snack Bhodhoro re ...
Trixie imwe mhando yemhando yezvipfuyo izvo panguva ino inopa chirongo chepurasitiki chizere nemhando yembwa inobata. Izvo hazvina kupfava kana kuomarara uye, nekuda kwehukuru hwadzo, dzakanyatsogadzirirwa imbwa diki dzerudzi. Iwo akanakira kudzidziswa uye kuravira sehuku, salmon uye gwayana.
Natural snacks kune imbwa
Edgard & Cooper Candy ...
Kupedzisa, chikafu chepanyama kubva kuEdgar & Cooper brand, iyo inotivimbisa kuti inongoshandisa nyama yemombe, gwayana, mbatatisi kutsiva zviyo uye apuro uye pear mune izvi zvekudya (izvo nenzira ine dzimwe shanduro dzehuku, pakati pevamwe). Imbwa dzinozvida uye pamusoro pazvo chigadzirwa chakazvipira zvakanyanya kune zvakatipoteredza, kwete chete nekuda kwezvinhu zvayo zvechisikigo, asiwo nokuti, semuenzaniso, kuputirwa kunogadzirwa nepepa.
Zvikafu zvembwa zvinodiwa here?
Pfungwa, Kana imbwa yako ichitevera kudya kwakadzikama uye inodya zvakakwana, zvokudya zvekudya hazvidiwi. Zvisinei, maonero aya anongogumira kunzira yekudya kunovaka muviri, sezvo zvikafu zvinogona kuva nezvimwe zvinoshandiswa pane kungopa imbwa yako mufaro.
Somuenzaniso, iyo yakanyanya kupararira kushandiswa kwezvikafu ndeyekuvashandisa kudzidzisa imbwa yedu kana kuti kumujairira kune mamwe mamiriro ezvinhu asingafadzi. Nenzira iyi, zvakajairika kuvashandisa kuvaita zvirinani kumirisana nenzendo dzekuenda kun'anga, kuita kuti vajairire kuvageza kana kutovaisa pa leash kana kuita kuti vapinde mutakuri: kuziva kuti pakupera kwemaitiro akaoma pachava nemubairo unovabatsira kutsungirira .
Pfungwa ndeyekupa mubairo imbwa yako pese paanoita chimwe chinhu nemazvo. Mune imwe pfungwa yakanaka, chikafu chembwa chinobatsirawo kusimbisa maitiro atinoda kuti vaite kana kudzokorora, semuenzaniso, kana tiri kudzidzisa chipfuyo chedu kupa paw kana kushandisa pad. Pese paanozviita, uye achizviita nemazvo, anopihwa mubairo wekupuruzira, mazwi emutsa uye kubata.
Zvisinei, usashandise zvisizvo izvi, sezvo vanogona kukonzera uremu, kunyange zvazvo pane nguva dzose zvingasarudzwa zvine utano kupfuura vamwe.
Pane masnacks evanhu kumbwa here?
Kune chikafu chevanhu chinogona kudyiwa nembwa uye chadzinogona kududzira sechikafu, kunyange zvazvo tichifanira kungwarirawo zvokudya zvatisingafaniri kuvapa nengozi yokuita kuti vanzwe vakashata kana kuti kutonyanya kuipa.
Saka, Pakati pezvokudya zvevanhu zvatinogona kupa imbwa yedu, kunyangwe nguva zhinji iri pakati nepakati, tinowana:
Makarotsi, iyo inewo mavhithamini uye inovabatsira kuchengetedza tartar.
Apples, iyo inogoverawo vhitamini A, kunyange zvazvo tichifanira kuva nechokwadi chokuti haina kuora kana kuti tingagona kuisa chepfu nokusaziva.
Popcorn, sezvazviri, pasina bhotela, munyu kana shuga.
Pescado sesalmon, prawns kana tuna, kunyangwe uchifanira kutanga wabika, sezvo hove mbishi dzinogona kurwarisa.
Carne sehuku kana turkey, yakaonda kana yakabikwa. Vanogonawo kudya nyama yenguruve, asi muhuwandu hushoma, sezvo ine mafuta akawanda uye yakaoma kuti igaye.
ari dairy zvakadai sechizi kana mukaka zvinogonawo kuva chikafu chembwa, kunyange muhuwandu huduku. Zvakare, kana imbwa yako isingawirirani nelactose, usaipe kana kuti inomurwarisa.
Chii chisingadyi imbwa?
Kune zvakawanda zvekudya zvevanhu zvinogona kuita senge chikafu chembwa, uye hapana chinopfuura kubva kuchokwadi: zvokudya izvi zvinogona kukuvadza zvakawanda uye zvakatonyanya kuipa, izvo zvausingatombofungi kuvapa nazvo.
chokoreti kana kofi, uye chero chinhu chine caffeine. Izvo zvine chepfu kune imbwa dzine urombo, dzinonzwa dzichityisa uye dzinogona kutodziuraya, mukuwedzera pakukonzera kurutsa uye manyoka.
Nuts. Kunyange zvazvo ane chepfu ari nzungu dze<em>macadamia, nzungu dzacho dzinogona kuparira imbwa kudzipwa.
Frutas semazambiringa, michero yecitrus, avocado kana makokonati hazvivafadze uye zvinogona kukonzera kurutsa uye manyoka.
La sinamoni inewo zvinhu zvisina kunaka kwavari, kunyanya muhuwandu.
hanyanisi, garlic uye chikafu chine hukama zvakare chine zvinhu zvine chepfu kumhuka yako.
Pakupedzisira, sezvatareva, kana iwe uchizopa nyama kana hove zvinofanira kubikwa kuitira kuti vanzwe zvakanaka, kana zvisina kudaro mabhakitiriya aripo mune izvi zvekudya zvakasvibirira anokuvadza zvikuru kwavari.
Kupi kunotenga chikafu chembwa
Kune dzakawanda nzvimbo dzakasiyana kwaunogona kutenga imbwa dzekudya., kunyangwe mhando yeizvi ichasiyana zvishoma. Semuyenzaniso:
En Amazon Iwe uchawana zvakasiyana-siyana zvezvikafu kubva kune zvakanakisa mhando. Mukuwedzera, iwe unogona kuzvitenga mumapakeji kana pane inodzokororwa nemutengo unodhura. Iyo internet hofori inozivikanwa zvakare nekuunza zvawakatenga kumba pasina nguva.
En online stores zvakadai seTiendaAnimal kana Kiwoko iwe uchawana chete mhando dzakanakisisa, uyezve, kana iwe ukaenda kune yemuviri vhezheni yeimwe yezvitoro zvavo, mabharani avo anogona kukubatsira kusarudza iyo iyo imbwa yako ichada zvakanyanya, pamwe nekuona kuti chii. sarudzo dzainadzo kana, semuenzaniso, uine chero allergies.
En nzvimbo huru seMercadona kana Carrefour iwe unogonawo kuwana zvakasiyana siyana zvekudya zvembwa. Kunyange zvazvo vasina zvishoma zvakasiyana-siyana, kunyanya maererano nezvokudya zvechisikigo, ivo vakagadzikana nokuti tinogona kuwana zvishoma patinenge tichitenga vhiki nevhiki, semuenzaniso.
Imbwa svutugadzike haisi kungobata kuita kuti imbwa yedu ifare panguva yakakodzera, asi inobatsirawo kana isu tichiidzidzisa. Tiudze, iwe unopa zvakawanda zvekudya kune chipfuyo chako here? Ndezvipi zvaunofarira? Iwe unofunga kuti zviri nani kusarudza mhinduro yeindasitiri kana chimwe chinhu chakasikwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Imbwa snacks: Yummy inobata chipfuyo chako
Imbwa Magumbeze Akanakisisa eMarudzi Ese
mabhandi echigaro chembwa